मोबाइल | Nepali Virals
मार्च 16, 2016 | संस्कृति, हट टपिक्स
भगवान शिवको अनुहार, स्टाइल अनि पहिरन कस्तो थियो होला? सायद शिवजीको वर्णन गरेर पूराण रचना गर्नेले पनि देखेको थिएनन् न त हामीले घरको पुजाकोठा तथा मन्दिर अनि भित्तेपात्रो देखी माला र कपडामा टाँगे छापेका तस्वीरको सृजना गर्नेले नै देखेका थिए। वास्तवमा हामीलाई भगवानको रूप सदृश्य देखाउनका लागी कलाकारहरूले भगवानको मूर्ति तथा तस्वीरको रचना गरेका हुन् सायद उनिहरूको कल्पनाशिलताले हाम्रो विश्वास जित्यो र हामीलाई उनीहरूले दिएको शिव, राम, सरस्वती सबै देवी देवताको तस्वीरमा साँच्चै शिव, राम अनि सरस्वतीको बासको अनुभूती भयो।
वास्तवमा भगवान कसैले देखेको छैन। न त उनीहरूको स्वभाव र आचरणको नै अनुभव कसैले गरेको छ। तर पुराणहरूमा वर्णन गरिएका शैली, व्यक्तित्व र पहिरन व्यवहारलाई आधार मानेर कलाकारले आफ्नो कल्पनाशक्तीको माध्यमले भगवानलाई साक्षात रूप दिए। त्यही रूपमा हाम्रो आँखाले राम, शिव, सरस्वतीलाई साक्षातकार गरयो अनि हामीले पायौं घरको पुजा कोठा देखी अस्पतालको शल्लीक्रिया कक्ष सम्म भगवानको आराधना र दर्शन गर्ने अवसर।
कलाकारको कल्पनाशिलता समयसँगै परिवर्तन हुन्छ। अनि उसले भोगेको समाज अनुसार उसको प्रस्तुती पनि हुन्छ। त्यसैले त यतिखेर हनुमान अनि कृष्णजी टेलिभिजनका पर्दामा बाल हनुमान र कृष्ण बनेर बालबालिकालाई उही रामायण र महाभारतका कथा र पात्रको बयान गरिरहेका छन् एनिमेसन चलचित्र मार्फत। यो पनि कलाकारको कल्पना र सृजनाको नै उपज हो। समयसँगै भगवानमा आस्था राख्ने, व्यक्त गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तन हो यो।
समकालिन समय र प्रवृती शैली अनुसार कलाकारको कल्पना र त्यसले पाउने रूपमा फरक आउँछ नै। यतिखेर मोबाईलको जमाना छ, स्मार्टफोन र सेल्फिले बजार पीटेको छ। सामाजिक संजालमा सेल्फी पोस्टने र त्यसैमा साता दिन सम्म आउने लाईक र कमेन्ट हेरेर मख्ख पर्नेको बहुमत छ। कल्पना गर्नुस यदी यस्तै स्मार्टफोन र सेल्फी क्रेज भगवानको पालामा भएको भए तपाईं हाम्रा पुजाकोठा, घरका भित्तामा झूण्डीएका भगवानका फोटामा उनीहरूको भावभंगी कस्तो हुन्थो होला?
साँच्चै नै भगवानको पालामा मोबाइल भएको र आजको हाम्रो पालाको जस्तो क्रेज भएको भए ! कल्पना गर्नुस् त!
हातहातमा मोबाइल बोकेका ३३ करोड देवतालाई मोबाइल सेवा दिने भनेका नारद मुनि नै हुन्थे होलान्। सूचना आदान प्रदानको एउटा मात्रै माध्यम बनेका नारद मूनि पनि अहिले योगको मार्केटिंग गरेर अथाह सम्पत्ती जोडेका बाबारामदेव जस्तै कर्पोरेट मूनि हुन्थे कि ?
भगवानहरू नारद मूनिको नारायण नारायणको गीति शैलीलाई मोबाइलको रिंगटोन राख्थेहोलान्। शिवजी किराँत रूप धारण गरेर जंगल जंगल चहार्दा पार्वतीले फोन गरेर कम्ता प्रश्न सोद्धी होलिन?
सरस्वतीले बुढा ब्रम्हाजीसँग खिचेको सेल्फीमा धनकी देवी लक्ष्मीले ‘लोल’ कमेन्ट लेख्दिहुन्। शेषनागहरूलाई भगवान विष्णुको मोबाईल पानिबाट जोगाउन नि कम्ता सास्ती हुँन्थेन होला। उता कृष्णजीको लिला एमएमएस बनेर तिनै लोकमा ब्याण्डवीथ खाइरहेको हुन्थ्यो होला! अनि राधा र कृष्णको सेल्फीले लाईकको रेकर्ड राख्थ्यो।
महादेवले कालकुट विष पिएको फोटो र भिडियोको भ्यूज, सेयर र रिट्वीटको तथ्यांक राख्न नै अर्को कम्प्युटर प्रणाली विकास हुन्थ्यो होला।
यस्तै कल्पना गरेर भारत पूणेकी २४ वर्षिय अद्रिता दासले प्रचलनमा रहेका भगवानका तस्वीरहरूमा फोटोसफको माध्यमले स्मार्टफोन, सोसल नेटवर्क र सेल्फीको क्रेज घुसाएकी छिन्। यसलाई भगवानको निन्दा भन्दा पनि यतिखेरको क्रेज र शैलीमा भगवानलाई प्रस्तुत गरेको रूपमा लिएर हेर्नु उपयुक्त होला। उनले तयार पारेका तस्वीर यस्ता छन्:
महाभारतको युद्ध सुरू हुनु अधि कृष्ण अर्जुनको सेल्फी
राधा कृष्ण र सेल्फी
महाकाली र सेल्फी
राम सिताको बनबासकालको सेल्फी
हनुमानको छातीमा इन्स्टाग्राम
यी हुन् राम्रो सेल्फी खिच्ने १० मोबाइल
जन 2, 2016 | हट टपिक्स
सेल्फी, यसका ’boutमा केही भन्नै पर्दैन। यसको क्रेज विश्वभर अझ सम्म पनि चुचुरोमा नै छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर अनि गुगलप्लसमा दैनिक करोडौं सेल्फी अपलोड हुन्छन् अरबौंको संख्यामा लाइक अनि करोडौंको संख्यामा नै कमेन्ट पाउँछन्। सेयर गर्नेको संख्या पनि लाखौं भन्दा माथि नै होला।
युवतीहरुको फेसबुकको टाइमलाइन त करिब करिब सेल्फी ले नै भरिएको हुन्छ। मुख दायाँ बंग्यायो एउटा अनि बायाँ बंग्याएर अर्को अनि अर्को चैं सुँगुरमुखे बनाएर अगाडी लेप्प्राएर कम्तिमा पनि तिनवटा पोज त सेल्फीमा गइ नै हाल्छ। अनि त्यसमा कुनै एपले स्टाइल निकाल्यो र फेसबुकमा अपलोड गरयो। यो आम दैनिकी हो यतिखेरको।
आफैले आफ्नो फोटो खिचिने भएकाले सेल्फी भनिएको यो फोटो खिच्ने शैलीको लोकप्रियतासँगै सेल्फी एपहरु पनि प्रशस्त बनिसकेका छन्। गुगलमा सर्च गर्ने हो भने हजारौंको संख्यामा सेल्फी एप पाउन सकिन्छ। सेल्फीको क्रेजसँगै मोबाइल फोन निर्माताहरुले पनि मोबाइलको फ्रन्ट क्यामेराको गुणस्तरमा सुधार गरेका छन् ताकि मानिसहरुले राम्रो सेल्फी लिन सकुन।
यतिखेर बजारमा उपलब्ध १० यस्ता मोबाइल फोन छन् जसले उत्कृष्ठ सेल्फी खिच्न सक्छन्।
१. आइफोन सिक्स
२. सामसुङ ग्यालेक्सी नोट फोर
३. ओपीपीओ एन वान
४. जिओनी इलाइफ इ सेभेन मिनि
५. कार्बन टिटानियम अक्टोन प्लस
६. जिओनी इलाइफ एस फाइभ.वान
७. सोनी एक्सपेरिया सी थ्री
८. सामसुङ ग्यालेक्सी इ सेभेन
९. एचटीसी वन एम एट
१०. माइक्रोम्याक्स क्यानभास नाइट ए थ्रीफिप्टी
भेटियो ८०० वर्ष पुरानो मोबाइल
जन 1, 2016 | हट टपिक्स
अर्को ग्रहबाट आएका मानिसहरुले छोडेको आशंका गरिएको मोबाइल भेटिएपछि यतिखेर विश्वभर हंगामा फैलिएको छ। मोबाइल फोनलाई आधुनिक आविस्कारको साधन मान्दै आइएकोमा पुरातत्वविदहरुले ८०० वर्ष पुरानो मोबाइल भेटाएपछि पृथ्वी बाहेक अर्को ग्रहका मानिस र उनीहरुको विकास’bout फेरी अर्को बहस छेडिएको छ। अष्ट्रियामा भेटिएको ८०० वर्षपुरानो भनिएको मोबाइल नोकियाको पुरानो डिजाइनको जस्तै आकार प्रकारको छ। यसको किप्याडमा अंक र अंग्रेजीको अल्फाबेटको सट्टामा विभिन्न फरक फरक शैलीका चित्रहरु रहेका छन्।
पुरातत्वविदहरुको यो दाबीसँगै पृथ्वीमा अर्को ग्रहबाट मानिसहरु आउने गरेको दाबीलाई बल पुगेको छ। सँधैजसो अर्को ग्रहका मानिस र उनीहरुको पृथ्वी भ्रमण षडयन्त्र सिद्धान्तका रुपमा रहने गरेको छ। अमेरिकाले विश्वका विभिन्न स्थानमा अर्को ग्रहबाट आएका मानिसको लाश र अन्तरिक्ष यान आफ्नो कब्जामा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको हल्ला चल्न थालेको पनि दशकौं भइसकेको छ। तर यतिखेर र्सार्वजनिक रुपमा नै अर्को ग्रहका अन्तरिक्ष यात्रीले पृथ्वीमा छोडेको मोबाइल भनेर अन्वेशकहरुले भिडियो नै सार्वजनिक गरेका छन्।
अष्ट्रियामा उत्खननका क्रममा फेला परेको मोबाइलमा रहेका अक्षरहरु सुमेरियन रहेको उनीहरुले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उल्लेख छ। यसखालको लेखन अहिलेको इरान तथा इराक र प्राचिन मेसोपोटामियामा प्रचलनमा रहेको थियो भनिन्छ। यस खालको मोबाइल भेटिनुले प्राचिन विश्वको विकासको अवस्था देखाउँछ भने अन्य ग्रहबाट मानिसहरु पृथ्वीमा आउने गरेको रहस्यलाई पनि बल पुरयाउँछ।
अहिले सम्म नोकियालाई मोबाइल आविस्कार र प्रचलनको थालनीकर्ता मानिन्छ। आधुनिक सञ्चार प्रविधिका रुपमा लिइने मोबाइलको पछिल्लो विकास एक सय वर्षपनि पुरानो छैन। यस्तो अवस्थामा नोकियाको मोबाइल कै डिजाइनमा रहेको ८०० वर्षपुरानो फोन भेटिनु झन रहस्य पूर्ण छ।
जन 31, 2014 | टेक्नोलोजी
पासकोड प्रयोग तपाइँको स्मार्टफोन एण्ड्रोइड वा आइफोन जे भएपनि त्यसमा तपाइँले फोन लक कोड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त स्क्रिन लकको सुविधा पनि फोनमा नै हुन्छ। तपाइँले एपस्टोरमा स्क्रिन र फोन लक गर्ने एप पनि सजिलै र सित्तैमा पाउनुहुन्छ। यसको प्रयोग गर्नुभयो भने हतपत तपाइँको फोन हातमा पार्नेले फोन खोलेर तपाइँको सूचना, सर्म्पर्क तथा तथ्यांकहरु हात पार्न वा तीनको गोप्यतामा खेल्न पाउँदैन।
गुगल एकाउन्ट तथा आइक्लाउड सुरक्षित राख्ने स्क्रिन तथा फोन लक वा पासकोडको माध्यमबाट फोनलाई सुरक्षित गरेपछि तपाइँले आफ्नो फोन सजिलै खोल्न नसकिने त बनाउनु भयो तर दोस्रो सुरक्षाको चरणका रुपमा तपाइँले आफ्नो गुगल तथा आइक्लाउड एकाउन्टलाई पनि सुरक्षित पार्नुपर्छ। त्यसका लागि आफ्नो गुगल एकाउन्टको सेटिङमा गएर टु स्टेप भेरिफिकेसन अप्सनलाई सुचारु गर्नुपर्छ। यसो गर्दा तपाइँको फोनमा इमेल खोल्दा एउटा विशेष कोड राख्नुपर्छ जुन तत्काल जेनेरेट भएर तपाइँको फोनमा आउँछ।
जेलब्रेक र रुट नगर्ने जेलब्रेक वा रुट एउटा तरिका हो जसबाट तपाइँले आफ्नो फोनलाई आफ्नो तरिकाले र नियन्त्रणमा राखेर चलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाइँ मोटरसाइकल मोडिफाइ गरेर चलाउनुसँग पनि दाँज्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले यसो गरेको खण्डमा तपाइँको मोबाइलको ग्यारेन्टी तथा वारेन्टी त जान्छ नै तपाइँ यदि सामान्य प्रयोगकर्ता मात्र हो भने तपाइँको फोन नै काम नलाग्ने अवस्थामा समेत पुग्न सक्छ।
एप राख्दा सावधान स्मार्टफोनका लागि तयार एप स्टोरहरुमा खरिद गर्नुपर्ने मात्र नभएर सित्तैमा उपलब्ध एपहरु भकारी भरी भइसकेका छन्। त्यसो त विभिन्न वेबसाइटहरुले पनि आफ्ना एपहरु वेबसाइटमा डाउनलोडका लागि उपलब्ध गराएका छन्। इन्टरनेटको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष नै एप डाउनलोड र अपडेट हुन थालेको छ। तर तपाइँले जहाँसुकैबाट पनि एप डाउनलोड गर्नुभयो र फोनमा राख्नुभयो भने त्यो तपाइँको लागि खतराको घण्टी बन्दछ। त्यसैले फोनमा आधिकारिक एपस्टोरबाट मात्र एप डाउनलोड गर्नु पर्छ। यदी तपाइँ एण्ड्रोइड फोन लिनुहुन्छ भने गुगल प्ले, एप्पलका फोन लिनुहुन्छ भने आइट्यून र वीण्डोज फोन लिनुहुन्छ भने वीण्डोज स्टोरबाट मात्र एपहरु डाउनलोड गर्नुहोस्।
सकेसम्म एप प्रयोग तपाइँको फोनमा ३२ वा ६४ जीबी सम्मको मेमोरी क्षमता छ भने यसको मतलब यो होइन कि त्यसमा मन लागेसम्मका फोटो र गीत राखौं। तपाइँलाई स्मार्टफोनमा विभिन्न एपहरु राख्ने सुविधा छ साथै तपाइँलाई सेवा दिने प्रदायकहरुले पनि मोबाइल एपहरु विकास गरेर निशुल्क प्रदान गरिरहेका छन्। त्यसैले सकेसम्म आफ्नो कामका लागि इन्टरनेट ब्राउजर भन्दा एप नै प्रयोग गर्नु राम्रो। विशेष गरेर बैंक वा सेयर मार्केटको कामका लागि त ब्राउजर भन्दा एप नै सुरक्षित हुन्छ। एपबाट काम गर्दा तपाइँको कारोबार साथै मोबाइल पनि सुरक्षित हुन्छ।
अक्ट 29, 2013 | टेक्नोलोजी
मोबाइल बोक्नेहरुका लागि पटक पटक मोबाइल हृयाङ हुनु हैरानीको कुरा हो। यसखालको समस्या तपाइँले पनि भोगिरहनु भएको होला। विभिन्न एप्लिकेसनहरु चलाइरहेको समयमा मोबाइल अचानक हृयाङ हुन्छ। अनि यसखालको हृयाङ हुने क्रम पटक पटक दोहोरिन्छ। यसले तपाइँलाई हैरान गराउँछ। मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउँदा अनि फोन गरिरहेको समयमा पनि मोबाइल हृयाङ भएर हैरान गराउँछ।
स्मार्टफोनमा यसखालको हैरानीको कारण हो मोबाइलको आन्तरिक मेमोरी र रयाम कम हुनु। जसले गर्दा ठूला आकारका धेरै ग्राफिक भएका एप्लिकेसनहरु चलाउँदा मोबाइल हृयाङ हुन्छ। यदी तपाइँको मोबाइल समय समयमा हृयाङ हुन थालेको छ भने जान्नुहोस् त्यसको मेमोरी र रयाम तपाइँको आवश्यकता भन्दा धेरै कम छ।
मेमोरी र रयाम मात्र नभएर मोबाइल फोनको हार्डवेयर राम्रो नभएको खण्डमा पनि चलाउन थालेको केही समय पछि नै मोबाइल हृयाङ हुने समस्या देखा पर्छ। विशेष गरेर सस्तो मूल्यमा पाइने भारतीय तथा नेपाली ब्राण्डमा बजारमा उपलब्ध हुने मोबाइल फोनहरुमा बढि हृयाङ हुने समस्या देखिन थालेको छ। त्यसको कारण हो मोबाइलमा प्रयोग भएका हार्डवेयरको गुणस्तर कमसल हुनु। यसखालका समस्याबाट जोगिनका लागि मोबाइल किन्ने समयमा त्यसमा रहेका सफ्टवेयर, सुविधा र विशेष गरेर अपरेटिङ सिस्टम हेरेर मोबाइल किन्ने निर्णय नगर्नु नै उत्तम हो। (यहाँ हेर्नुस मोबाइल किन्दा केमा ध्यान दिने)
यदी तपाइँले किनेको र चलाइरहेको मोबाइल समय समयमा हृयाङ हुन्छ भने तपाइँले यी उपाय अपनाएर राहत पाउन सक्नुहुन्छ।
पृष्ठभूमि (ब्याकग्राउण्ड)मा चलरिहेका र चल्ने खालका एपहरुलाई बन्द गर्ने। यसो गरेको खण्डमा फोनमा रहेको रयामको खपत केही कम हुन्छ र नयाँ खोल्ने एपका लागि केही स्थान उपलब्ध हुन्छ।
यदी तपाइँको फोनमा पृष्ठभूमिमा चलिरहेका एप बन्द गर्दा पनि फोन हृयाङ हुनबाट मुक्ति मिलेन भने फोनलाई स्वीच अफ गर्नुस्। यसो गर्दा मोबाइल बन्द भएपनि फोनमा रहेका डाटा सुरक्षित नै रहन्छन्।
मोबाइल स्वीच अफ गरेपछि फोनको पछाडीको भाग (ब्याक प्यानल) खोलेर ब्याट्री झिक्नुहोस्। तर सीम र मेमोरीकार्ड भने झिक्नुपर्दैन।
ब्याट्री झिकीसकेपछि पनि मोबाइलको पावर स्वीच ५ देखी १० सेकेण्ड सम्मका लागि अन अफ गर्नुस्। यसो गर्दा मोबाइलमा रहेको पावर पनि समाप्त हुन्छ।
यसो गरिसकेपछि मोबाइलमा फेरी ब्याट्री राखेर मोबाइल अन गर्नुस्। मोबाइल फेरी चलाउन सकिने अवस्थामा आइपुग्छ। यसरी अन गरेपछि फोन फेरी हृयाङ हुँदैन।
यति गरेपछि पनि मोबाइल फेरी पटक पटक हृयाङ भइरहृयो र समस्या समाधान भएन भने मोबाइलको आन्तरिक मेमोरी केही खाली गर्नुपर्छ। आन्तरिक मेमोरी भरिएको खण्डमा पनि मोबाइल हृयाङ हुने भएकाले त्यसमा रहेका केही फाइल हटाउनुपर्छ। साथै फोन चलाउँदा उत्पन्न हुने क्याच फाइल र टेम्पोररी फाइल पनि समय समयमा डिलिट (क्लिन मेमोरी) गरिरहनुपर्छ।
याद राख्नुस मोबाइलको आन्तरिक मेमोरी ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन।